‘प्रस्तुति राम्रो नभएका मन्त्रीहरु हटाउनुपर्छ’ (अन्तर्वाता) - Birat Sandesh
बजारका लागि निस्कीएका घिमिरेको शव सिंघिया खोलामा भेटियो
निसास्सिएर आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु
ओली-मोदीले गरे विराटनगर-जोगवनी इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट उद्घाटन
यसै वर्ष नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम बनाउँदैछु: मोदी
‘प्रस्तुति राम्रो नभएका मन्त्रीहरु हटाउनुपर्छ’ (अन्तर्वाता)
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवम् युवा नेता कृष्णभक्त पोखरेलले कार्यसम्पादनमा चुकेका र प्रस्तुति राम्रो देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रीहरु हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओली छलफलमा रहेकोले छिट्टै निश्कर्षमा पुग्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । पार्टीभित्र शीर्ष तहमा सम्वाद नभएकोमा उनले गुनासो पोखे । तर, अब आगामी दिनमा नेताहरुबीचको सम्वादलाई बाक्लो बनाउनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिएका छन् । रेडियो कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलाले पोखरेलसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाभित्र नेतृत्वमा विवाद छल्कियो नि ?
एउटा जीवन्त पार्टीमा क्रिया तथा प्रतिक्रिया र छलफल हुन्छन् । त्यसको अर्थ पार्टीभित्र एकदम ठूलो विवाद छ भनेर बुझ्नुुहुँदैन् । मूल नेतृत्वका बीचमा मूल विषयमा सहमति नै भएको छ । एकाध दुई विषयमा हुने छलफलको विषयलाई लिएर विवाद भयो भन्नुहुँदैन । छलफल भएकै विषयलाई अन्तरकलह भयो भन्नुहुँदैन् । नेतृत्वका बीचमा सम्वाद जारी रहन्छ ।
उसो भए तपाईहरुको अध्यक्षका बीचमा विवाद नै छैन त ? बाहिर त अध्यक्षका बीचमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नभएको कुरा आएको छ नि ?
मूलतः कानुन निर्माण गर्ने कुरामा दुई फेज हुन्छन् । एउटा सरकारको तर्फबाट विद्येयकहरु तयार पार्ने । र, अर्को संसदले पारित गर्ने । सरकारको तर्फबाट ल्याउने विद्येयकहरुको बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ । गुठी विद्येयकको विषयले नै अब गम्भिर र महत्वपूर्ण विद्येयकहरु ल्याउँदा पार्टीभित्र पनि छलफल गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसपटक देखियो ।
नेकपाको अहिलेसम्म पोलिटब्यूरोलगायतका महत्वपूर्ण बैठकहरु बस्न सकेका छैनन, तपाईहरुको नेताहरु कहाँ छलफल गर्नुहुन्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टी कार्यकर्ता वेश पार्टी भएको कारणले गर्दा कमिटीहरु चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म यो एक वर्षको अवधिमा कमिटी गठन गर्ने, बैठक बस्ने काम भएको छैन । यो अत्यन्तै दुःखान्त पक्ष हो । अहिले जिल्ला कमिटीहरु बनेका छन् । अबको एक महिनाभित्र स्थानीय तहका कमिटीहरु पनि गठन हुन्छनु । यो काम क्लियर भैसकेपछि अब तल्लो तहमा प्राकृतिक दोहन रोक्नको लागि कमिटीहरु चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । मूल नेतृत्वको बीचमा यतिवेला धेरै कामहरु बाँकी छन् । हामीले चुनावका बेला गरेका संकल्पहरु र घोषणापत्र छन् । जनतासामू गरेका वाचा तथा प्रतिबद्धताहरु छन् । शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको काम बाँकी छ । जनतासामू गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नुपर्छ । हामीलाई अब कुनै छुट छैन् ।
पार्टी एकता गर्दा एक विमानका दुई पाईलट भनियो, तर खोई त व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको ?
अर्को महाधिवेशन नभएसम्म एक विमानका दुई पाईलट नै हुन नि । यही भावनाअनुसार चल्नुपर्छ । यदि उहाँहरुमध्ये जसले यो भावनाअनुरुप चल्ने कोशिस गर्नुभएको छैन । अब त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई कुसनैपनि कोणबाट कमजोर बनाउने काम गर्नुहुँदैन् । दुवैको भावनालाई काफी सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यो स्पिरिटमा गईएन भने ठूलो दुर्घटना हुन्छ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्व एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । चूनौतिलाई अवसरको रुपमा परिणत गर्न सकिएन र पाएको अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने ईतिहासले हामीलाई धिक्कार्छ ।
दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकार चलाउनेबारे पनि विवाद देखियो, के हुन्छ अब ?
सहमति भएका कुरा कति सार्वजनिक भएका छन् । कति भएका छैनन् । भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सहमतिहरु दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, नियमित कार्य त स्वभाविक हो । तर, गम्भिर प्रकृतिका निर्णय गर्दा छलफल गर्नुपर्छ । सामूहिक निर्णयमा जान सकिएन भने पार्टी कहीँ न कहीँ च्यातिन्छ । त्यसलाई टाल्न गाहा«े हुन्छ । पार्टीलाई एउटै आत्माको रुपमा लिएर जाने कुरामा नेतृत्व गम्भिर हुनुपर्छ ।
तर, झलनाथ खनालले त प्रधानमन्त्री ओली एक्लै खोज्न हिँडेको आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
शीर्ष नेताहरुले नियमित सम्वाद यदि गर्नुभएको छैन भने तत्काल स्थापित गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा चेन अफ कमाण्ड पनि जरुरी छ । त्यसपछि कलेक्टिभ लिडरसिप पनि जरुरी छ । टाल्नै गाहा«े हुनेगरि च्यातिनुहुँदैन् ।
उसो भए आलोपालो सरकार चलाउनेबारे सहमति भएकै हो त ?
उहाँहरुबीच के सहमति भयो भन्ने कुरा हाम्रो तहमा आएको छैन् । जे सहमति नेतृत्वको बीचमा भएको छ, त्यो दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । अहिले नै विश्वासको धरातल कमजोर भएको अवस्था होईन।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने तयारी भैरहेको छ भनिएको छ, यसमा सत्यता छ ?
प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा मन्त्रीहरुको कामकारबाहीबारे नियमित रुपमा मूल्यांकन गर्नुभएको छ । प्रस्तुति र कार्यक्षमता नै देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई राखिरहनुहुँदैन् । मन्त्रीहरुको प्रस्तुति, क्षमता र कार्यसम्पादको समिक्षा भैरहेको छ । यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीको मूल नेतृत्व एउटा निर्णयमा पुग्छ ।
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७६, शनिबार १७:४४
इटहरीमा आगलागी हुँदा १० करोड बराबर क्षति भएको अनुमान
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै आज पनि प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप
डेंगुबाट बंगलादेशमा ४० को मृत्यु
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै
सरकारले हठ नत्याग्दा विप्लवको हिंसा: कांग्रेस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विराटनगर जोगवनीमा रहेको इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट संयुक्त...
सभामुखमा अग्नि सापकोटाको उम्मेदवारी, समर्थकमा राजपा
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य अग्नि सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । अग्नि...
वर्तमान सरकार असफल भएको कांग्रेस महामन्त्री कोईरालाको आरोप
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता
ईटहरीमा लोकप्रिय बन्दै ‘द इट्एरी किचन’
विराटनगरको सिंघिया खोलामा पुरुषको शव फेला परेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–२ का ५० वर्षीय प्रवल घिमिरेको शव मंगलबार बिहान सिंघीया...
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–४ दामनस्थित पानोरमा रिसोर्टमा आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक यज्ञप्रसाद...
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाल डिभीएम स्कुल परिसरमा लगाइयो डोजर
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठक: १२ वटा निर्णय
सप्तरीमा चट्यांङ लागेर एक जनाको मृत्यु
चिनियाँ राष्ट्रपति आज भारत जादैँ, भोली नेपाल आउने
रोजिना बनिन् मिस पूर्वेली सुपर मोडल
मुख्यमन्त्रीले १३ र मन्त्रीले ७ जना कर्मचारी सचिवालयमा राख्न पाउने
भारतीय सांसदले लिए नेपाली भाषामा सपथ
शृङ्खला खतिवडा बनिन् मिस नेपाल २०१८